Dongeng snow white and the huntsman dalam bahasa Igbo – qnc jelly gamat asli terbaik
Dongeng snow white and the huntsman dalam bahasa Igbo
4 Januari 2017 20 Desember 2016 qncjellygamatasliterbaik
O ruru otu mgbe e biri a ọmarịcha adaeze na mma akpụkpọ acha anụnụ anụnụ anya. Ọ bụ ya mere mma na ọ na aha ya bụ Snow White. Mama ya nwụrụ mgbe Snow White bụ nwa ọhụrụ na nna ya na nwunye ọzọ. Nke a eze nwaanyị bụ nnọọ mma ma ọ bụ dịkwa nnọọ obi ọjọọ.
Ajọ onye nnochi anya nne chọrọ ịbụ ndị kasị mma na nwaanyị n’ala-eze ọ na-ajụkarị ya anwansi mirror, “Mirror! Mirror na mgbidi! Ònye bụ nma nke ha nile? “Ma anwansi mirror ga-asị,” Ị bụ, di! “Ma otu ụbọchị, ndị mirror zara,” Snow White bụ nma nke ha nile! “The ajọ eze nwaanyị bụ ezigbo iwe na ekworo nke Snow White. Ọ nyere iwu ya huntsman na-Snow White na oké ọhịa na-egbu ya. “Achọrọ m ka i akpọghachite n’obi-ya,” ọ nyere iwu. Ma mgbe huntsman ruru oké ọhịa na Snow White, na O were ebere ya na ka ya free. O gburu a mgbada, were ya n’obi ajọ eze nwaanyị na gwara ya na o gburu Snow White. Snow White wagharịrị n’oké ọhịa n’abalị ahụ dum, na-eti.
Mgbe ọ bụ ìhè, ọ bịara a obere obi na bakwuuru. Mere onye e, ma ọ hụrụ asaa efere na tebụl na asaa obere akwa na ime. Ọ esie a magburu nri na kpochara ulo na ike gwụrụ, akpatre na-ehi n’otu n’ime obere akwa. N’abalị, asaa dwarfs onye bi na obi bịara n’ụlọ ya wee hụ Snow White na-ehi ụra. Mgbe ọ teta ma gwa ha, ya akụkọ, asaa dwarfs gwara ya ka ọ nọrọ n’obodo ha. Mgbe dwarfs na-anọghị ya, Snow White ga-eme ka ụtọ nri ha. The dwarfs hụrụ ya n’anya ma lekọta ya. Kwa ụtụtụ, mgbe ha hapụrụ ụlọ, ha gwara ya mgbe aka imeghe ụzọ na-amabughị.
Ka ọ dịgodị, ke ufọk edidem, ajọ eze nwaanyị jụrụ, “Mirror! Mirror na Ònye bụ nma nke ha.
The mirror zara, White bụ nma nke ha nile! O bi na asaa dwarfs n’ọhịa! “The ajọ onye nnochi anya nne were ezigbo iwe. Ọ bụ n’ezie a amoosu ma ụzọ isi mee anwansi potions. Ọ ugbu a mere ka a egbu egbu ọgwụ na tinye a-egbu maramara red apple n’ime ya. Mgbe ahụ, o nwoghariri onwe-ya dika agadi nwoke onye oru ugbo nwaanyị ma gaa n’ọhịa na apple. Ọ kụrụ aka obi ụzọ, si “Pretty obere nwa! Ka m na! Lee ihe m chọrọ ịgwa gị! “White kwuru,” Abụ m mere wutere ya, agadi nwaanyị, enweghị m ike ka ị na! The asaa dwarfs gwara m ka m ghara okwu na-amabughị! “Ma mgbe ahụ, Snow White hụrụ ndị onwunwu red apple, na meghere ụzọ. Ndị ajọ omume ojoo nyere ya na apple na mgbe ọ chịịrị a aru ogbenye Snow White dabara a ụra miri emi. Ajọ onye nnochi anya nne ya wee laghachi n’ebe ulo uku eze ma jụọ ndị mirror, “Mirror! Mirror na mgbidi! Ònye bụ nma nke ha nile? “The mirror zara,” Ị bụ, di! “Ma ọ bụ nnọọ obi ụtọ.
Mgbe asaa dwarfs bịara n’ụlọ ịchọta Snow White dina n’ala, ha bụ ndị nnọọ iwe. Ha tiri niile abalị na mgbe ahụ wuru otu iko akpati ozu maka Snow White. Ha nọ na akpati ozu ahụ n’ihu ebe obi. Otu ụbọchị, Prince Maa mma na-aga n’oge gara aga na obi na ọ hụrụ Snow White tọgbọ na akpati ozu. O wee gwa ndị dwarfs, “My! My! Ọ bụ mara mma nke uku Ga-amasị m susuo ya! “O me. Ozugbo, Snow White meghere anya ya. Ka dị ndụ ọzọ! The Prince na asaa dwarfs nwere nnọọ obi ụtọ. Prince Maa mma ndọ Snow White na ya kpọọrọ ya gaa n’obí ya biri n’obi ụtọ mgbe mgbe.
Tulisan SebelumnyaDongeng snow white and the huntsman dalam bahasa Hmong
Tulisan SelanjutnyaDongeng snow white and the huntsman dalam bahasa Italia